Inombolo enkulu yabantu bakhetha ukudweba njengento yokuhlobisa izindonga. Ukuyisebenzisa - lokhu kungenye yezinketho zokuklama ezingabizi kakhulu ezinhlotsheni ezahlukene zezakhiwo. Inombolo enkulu yemikhiqizo ehlukumezekile neyopende ikuvumela ukuba uthathe noma yimiphi imibala kanye nemithunzi yawo. Into esemqoka lapha ukukhetha izinto ezifanele. Isibonelo, kwezinye izindawo ezicindezelekile kakhulu (futhi lezi yizindonga zokugezela kanye nekhishi), okukhethwa kukho okungcono kakhulu ukudweba okunokwethenjelwa.
Imikhiqizo engaxhunyiwe kanye nezici zayo
Ukuze uqinisekise ukuthi ubuso abulahleki ukubukeka kwayo okuhle kakhulu isikhathi eside, kufanelekile ukusebenzisa zonke izinzuzo zokubunjwa okungaqondakali. Ngabo ungathola umbala odingekayo umbala, futhi wenze lula inqubo yokulungisa. Lezi zinhlanganisela zithole igama elinjalo ngenxa yezindawo ezikhethekile ezivumela ukuhlanza okumanzi kodonga.
Isibonelo, upende lwezindonga ekhishini liyakwazi kalula ukumelana nokwelashwa nganoma yikuphi, ngisho nokusho okunonya. Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuze kulondolozwe ukubukeka okumangalisayo nokuqina kwengubo, akufanelekile ukusetshenziselwa ukuhlanza nge-abrasives. Ukwenqaba iphepha lodonga ngokuthanda amapayipi anjalo kuzokulondoloza kusuka enkambisweni enzima kakhulu yokuthinta, okuyinto emva kwesikhathi okuzodinga ukuvuselelwa noma ukushintshwa. Ukuncoma ngokukhethekile lezi zinhlobo zamakhemikhali, uma indlu ikhula izingane ezithanda kakhulu ukudweba ephepheni noma ngezingubo zokugqoka. Umdwebo wezindonga ekhishini uyakwazi ukunciphisa izinkinga zemidwebo yezingane ize. Ngisho nendawo ephakeme kakhulu engcolile ingahlanzwa kalula, futhi ukukhwabanisa kungavezwa ngaphezulu.
Noma yimuphi umdwebo wokudweba kanye nemikhiqizo ye-varnish kufanelekile ngomsebenzi wangaphakathi. Futhi, lezi zinto zisebenza lapho kunomkhuhlane okhuphuka kakhulu. Emagumbini okugezela, lokhu ukugqoka kuyoba ukuvikelwa okuthembekile ekubunjweni kokunciphisa. Udonga oludweba ekhishini lungasheshe luhlanzeke i-grease ne-soot. Ukwakhiwa kwalo okuyingqayizivele kuwela ngokufanayo kunoma yiluphi uhlobo lokugqoka futhi ludale ngisho, ubuso obunqotshwa ukugqoka okuhlukahlukene.
Lo mkhiqizo ufanelekile futhi usebenzise nephepha lodonga elenziwe ngendwangu engavundiwe, noma ngeglasi. Amaphoyinti walolu hlobo asetshenziselwa kahle izindonga ezikhonjiwe, ukhonkolo, izitini, izindawo zokubeka phansi kanye nezinkuni. Amapayipi anjalo angavezwa ngisho namapulangwe anomzimba, ngaphandle kwephansi. Singasho ukuthi ziyonke.
Kunezinhlamba eziningi ezahlulekayo. I -paint and based-based based refinement, kanye nezingqikithi zamanzi ezahlakazeka, ama-analogs ahlukahlukene e-acrylic, kanye ne-silicate ne-latex ehlukahlukene. Futhi kukhona ama-silicone mix mix.
I-Acrylic, kanye namafomu we-latex ayethandwa kakhulu. Ziphephile, kulula ukuyisebenzisa, futhi ukugqoka kubonakala ngezici eziphezulu zokusebenza. Futhi kungacatshangwa ukuthi kukhona amapayipi akwazi ukugcoba kanye namafutha. Kodwa cishe sekuyeke ukusetshenziselwa ukuqedela imisebenzi ngaphakathi ekamelweni ngenxa yephunga, ubuthi obukhulu kanye nobungozi bomlilo.
Ipeyinti ye-acrylic ehlulekayo iphelele ekuqedeni imisebenzi egumbini lokuphumula, amakamelo abantwana, izindlu zokulala. Ukwakhiwa kuqukethe izinhlayiya zama-acrylic, ezinika lo mkhiqizo ukuqina okukhulu. Ukupenda kwe-Acrylic kuyilungele ukufaka emadongeni enkuni. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo uzokusiza ukufihla amaphutha amancane angaphezulu.
Enye inzuzo ukungabi khona kwephunga elimnandi. Uma ukugqoka kungcolile, kungenziwa kuhlanzwa nge-rag emanzini noma ukuwageze ngezinambuzane ezingenamandla. Ipeyinti elinjalo liyakwazi ukulwa nemigqa engaphezu kuka-3000 yokuhlanza ngaphandle kokulahlekelwa kwekhwalithi. Kukhona i-acrylic enombala eyodwa kuphela ephawulekayo. Lena inani eliphezulu.
Ukudweba kwe-latex kukhishwa kangcono kunamakhemikhali e-acrylic wokumelana nokugqoka. Lo mkhiqizo usetshenziselwa kabanzi ekuqedeni imisebenzi yalezo zakhiwo ezihlangabezana nemithwalo ephezulu. Kungaba izitebhisi ezihlukahlukene ezakhiweni zokuphatha, emakolishi esikoleni noma esibhedlela, kanye namanye amakamelo lapho kudingeka khona ukuhlanza njalo ngokusebenzisa ama-disinfectants nama-detergents anonya. Le mibala isetshenziselwa nanamuhla amakhishi ezindlini noma ezindlini.
Ukuze uhlambuluke izindawo ezidwetshiwe ngama-compounds anjalo, ungasebenzisa ama-rags noma izipanji nje kuphela, kodwa futhi uhlahlela ngamabhulashi athambile. Ubuso obuphathekayo ngale ndlela buphikisana kakhulu nokuphefumula. Izintengo zalo mkhiqizo ziphakeme kunezindleko zamakhemikhali e-acrylic, kodwa izici zingcono kakhulu. Izingoma ze-Acrylic nezingubo ze-latex ziphefumula, zenzeke ukuthi zizisebenzise emakamelweni amanzi. I-fungus ne-isikhunta ngeke zifake.
Izinhlobo zamapende nge-gloss degree
Kunezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zokwakheka okucwebezelayo. Ngakho-ke, kuthengiswa ukudweba kwe-matte, i-half-matt noma i-glossy. Okukhethwa lapha kuqondiswa kuphela yizintandokazi zakho nezici zangaphakathi.
Kodwa uma ugeza njalo nge-detergent kuphela ezinye izingxenye zodonga, njengendawo eseduzane netafula noma isitofu, kungcono ukukhetha ukugqoka okwesibhakabhaka noma okuyi-matt. Ukuhlanza njalo kungabangela ukupholisa phezulu. Uma upende lwe-matte lusetshenziswa odongeni, kuzokwenziwa ezinye izindawo ezine-glossy glossy.
Ama-silicone kanye ne-polyvinyl acetate
Leli peyinti elibiza kakhulu kunazo zonke. Intengo yayo ivela ku-ruble 1000 nangaphezulu kwereyi ngalinye. Lezi zingxube eziphefumulayo nezingabekayo. Ubuso, obudwetshiwe ngalezi zinhlayiya, nhlobo. Ngenqubo yokuqeda ngosizo lomkhiqizo, kungenzeka futhi ukufihla okungacacile, kufika ku-2 mm, ukuphahlazeka. Amakamelo ahlanzekile angahlobisa.
Okungabizi kakhulu, kodwa akukho ukukhetha okungezansi kwezobuchwepheshe - ingxube ye-polyvinyl acetate. Lezi zidwebo zizofaneka kahle ku-plasterboard, ukugqoka ama-plaster, ukhonkolo. Phakathi kwezinzuzo ezibalulekile - ukuphepha okukhulu komlilo, ukuma okusheshayo. Kodwa kunesimo esisodwa. Umshini awunawo ukumelana nokuswakama, okusho ukuthi amakamelo owomile kuphela angadwetshwa ngalezi zingxube.
Umehluko phakathi kwamapayipi e-acrylic namapayipi asekelwe emanzini
Ngokuvamile amakhosi asekhaya anesithakazelo ezintweni ezinjalo. Kodwa lapha ungabona isitatimende esingalungile sombuzo. Eqinisweni, kokubili ama-acrylic ne-latex formulation yizingxube zamanzi. Namuhla izinhlamba ezinjalo zibizwa ngokuthi amapayipi okuhlakazeka kwamanzi.
Ngaphambilini, ukupenda kwamanzi nemikhiqizo ye-varnish kwakuthandwa kakhulu, kodwa ukuxhumana okuncane kakhulu nomswakama noma oketshezi kwakungukuthi kuyingozi. Ipeyinti yahlanzwa phezulu. Namuhla, lezi zinto azitholakali ukudayiswa. Futhi lokho akudingeki kakhulu. Kunalokho, amalungiselelo okusabalalisa amanzi ahlongozwa namuhla.
Noma yimuphi upende wamanje wesisekelo wamanzi usekelwe kuma-polyacrylates. Manje ukukhiqizwa esigabeni sokukhiqiza kuchitheka emanzini, kodwa emva kokumiswa okuphelele akusiyo yonke indawo. Lezi zingxube zifanelekile ukuqedela noma yiziphi izakhiwo, kulula ukuyisebenzisa, futhi ziyashesha ngokushesha. Udwebo lwesibhamu se-spray lubuye lithengiswe. Futhi emva komsebenzi, ithuluzi ligeza kalula ngamanzi ajwayelekile.
Ukubuyekezwa kwemakethe yanamuhla ye-LCP
Manje imakethe yepende nemikhiqizo ye-varnish inikeza umthengi okuningi kwezimpahla. Zonke lezi zinkampani zikhiqiza nemibala ekhishwayo kufaka phakathi. Eziningi zezimpahla zinesidingo esihle futhi zingaziqhayisa ngezibuyekezo ezinhle.
Imikhiqizo ye-Paint ne-varnish yalo mkhiqizi yizingxube zekhwalithi ezisekelwe kuma-acrylate, ezakhiwe ngokukhethekile ukuze ziqede izakhiwo zangaphakathi. Lona udonga olulungile olupenda ekhishini elingahlulwa. Kulula ukusebenzisa, futhi ijubane lokumisa liphakeme kakhulu. Kunemithunzi eminingi nemibala etholakalayo.
Lo mkhiqizo waziwa kubo bonke abakhetha amaphoyinti e-latex okwakhonkolo noma izitini. Le nkampani iphinda ikhiqize izingqungquthela zephepha lodonga elingelusiwe kanye ne-plasterboard.
Izingxube ze-Acrylic zisebenza kalula kunoma yiziphi izindawo ezibushelelezi. Umkhiqizo ungasetshenziswa emakamelweni lapho umswakama uhlale uphakeme.
Umdwebo onokuzithokozisa walesi sitshalo yinkimbinkimbi esekelwe ngamanzi emakamelweni okudweba aphefumle kahle. Ipeyinti ilungele amakamelo okuphila, amahholo, izindlu zokulala. Kodwa okwakhiwe ngamakhishi nezindlu zangasese kungcono ukungakhethi.
Lo ngumkhiqizi ovelele kunazo zonke emakethe yasekhaya. Inkampani yaseFinland ikhiqiza izinga eliphezulu kakhulu, kodwa amapayipi abizayo. Isibonelo, ukudweba okunokwethenjelwa "Tikkurila." Inani lalo liqala kusuka ku-rubriki angu-740 ngomthamo wama-0.9 amalitha. Amalitha angu-18 alokhu okuzokwakhiwa kufanele akhokhe ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-12 nokuningi. Kuhleleka ngokufanayo kunoma yiluphi uhlobo lwendawo, lumile ngokushesha, lungcono ngamakhishi, izindlu zokugeza kanye nezindlu zangasese.
I-Latex detergents evela kulo mkhiqizi nayo inhle kakhulu emsebenzini wangaphakathi. Ukukhetha okuhle futhi okungabizi kakhulu kwamakamelo okugeza kanye namakhishi.
Izici zokusetshenziswa kwamapayipi ashable
Ngemuva kokubunjwa kusetshenziswe ebusweni, kubalulekile ukugcina isikhashana bese uphatha udonga oludwetshiwe ngokucophelela. Ukubunjwa akutholaki ngokushesha ukumelana nokugqoka. Lokhu kufanele kuthathe isikhathi esithile, kaningi kangamasonto ambalwa. Futhi ngemva kokudweba, ungasebenzisi ngokushesha ama-detergents amakhulu. Qala kangcono ngezithambile. Ungasebenzisi ama-solvents e-organic kanye nama-abrasives, ngaphandle kwalokho kuzomele uphinde upende. Uma sicabangela ukuthi iThikririla ethandwa kakhulu ukudweba imali emakethe yokwakha, intengo yokuhlanza okunjalo ingaba kakhulu, ephakeme kakhulu. Lokhu kufanele kukhunjulwe uma ukhetha.
Ngakho-ke, sithole ukuthi ukudweba kwezindonga ekhishini kuyatholakala yini futhi yiziphi izinzuzo.
Amathiphu awusizo: kanjani ukubeka tile phansi
Izinga lokushisa emva nokwelashwa ngamakhemikhali: izizathu. Kuyini imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali? Imiphumela engemihle ngamakhemikhali